Taageerada dawladda ayaa muhiim u ah duulista yoolalka cusub ee dhexdhexaadka ah ee kaarboonka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Aviation » Taageerada dawladda ayaa muhiim u ah duulista yoolalka cusub ee dhexdhexaadka ah ee kaarboonka
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • News • Dadka • Waajib ah • Wakhtiga waarta • Technology • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka
Taageerada dawladda ayaa muhiim u ah duulista yoolalka cusub ee dhexdhexaadka ah ee kaarboonka.
Dawladaha adduunka oo dhan ayaa ku cadaadinaya yoolalka dhimista kaarboonka. Si kastaba ha ahaatee, la'aanta qorshayaal la taaban karo oo ku saabsan sida kuwan lagu gaari karo ama maalgelinta la hayo ayaa muuqata.
Taageero la'aanta dawladda ee duulista ayaa muuqata, waxaana loo baahan yahay maalgashi ballaaran.
Dadaalka UK ee ah in dalalku ku biiraan 'Isbahaysiga Hawada Caalamiga ah ee Duulimaadyada' ee lagaga dhawaaqay COP26 kuma filna.
SAF waxay u noqon doontaa joogsi wanaagsan duulista si loo yareeyo qiiqa qiiqa iyada oo la tixgelinayo fursadaha tamarta muddada dheer.
Shirkadaha diyaaradaha iyo warshadaha duulista waxay ku dhibtoon doonaan inay la kulmaan yoolalka dhexdhexaadka ah ee kaarboonka oo keliya. Dawladuhu waa inay ku dhaqmaan iyagoo bixinaya maalgashi la taaban karo ka dib COP26 si loo hubiyo in ficil macno leh uu dhaco.
COP26 ayaa cadaadis saaray warshadaha duulista si ay u caddeeyaan sida ay uga go'an tahay in ay yareeyaan saameyntooda deegaanka. Dhawaan ayaa la ogaaday in 45% jawaab bixiyaasha caalamiga ah ay sheegeen in deegaanku yahay kan ugu muhiimsan arrimaha deegaanka, bulshada, iyo maamulka (ESG) marka loo eego agabka.
Iyadoo walaaca deegaanku noqonayaan mid aad muhiim ugu ah macaamiisha, warshaduhu waa inay wax ka qabtaan. Inkasta oo qorshayaal badan, kooxo shaqo, iyo ogeysiisyo badan lagu dhawaaqay ilaa shirka COP26, kuma filna kali ahaan in la yareeyo qiiqa warshadaha oo la abuuro isbeddel macno leh. Taageero la'aanta dawladda ee duulista ayaa muuqata, waxaana loo baahan yahay maalgashi.
Dawladuhu waxay taageereen rabitaanka qaybaha kale ee ah inay noqdaan kuwo deegaanka u saaxiib ah. Tusaale ahaan, soosaarayaasha baabuurta waxay heleen taageero iyo dhiirigelin ballaaran si ay ugu beddelaan wax soo saarka baabuurta korontada, laakiin warshadaha duulista ma helin dareen la mid ah ama maalgelin la mid ah.
Dawladaha adduunka oo dhan ayaa ku cadaadinaya yoolalka dhimista kaarboonka. Si kastaba ha ahaatee, la'aanta qorshayaal la taaban karo oo ku saabsan sida kuwan lagu gaari karo ama maalgelinta la hayo ayaa muuqata. The UKDadaalka lagu doonayo in dalalku ku biiraan 'Isbahaysiga Hamiga Hawada Caalamiga ah' ee lagaga dhawaaqay COP26 kuma filna.